Janaraal Pakistani ah oo loo magacaabay isbaheysiga Wamada Islaamka ah ee Sacuudigu hogaamiyo. | Shacabka Puntland	Monday, February 20th, 2017	Home
Janaraal Pakistani ah oo loo magacaabay isbaheysiga Wamada Islaamka ah ee Sacuudigu hogaamiyo.
Jan 9, 2017 - Post View: 17,511
Janaraal Raheel Sharif, oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka dalka Pakistan ayaa loo magacaabay in uu hogaamiyo isbaheysi militiri oo Sacuudi Carabiya hogaaminayso kaas oo ka kooban 39 dowladood oo kamid ah dalalka Islaamka, iyadoo u jeedka isbaheysiga ay tahay iskaashiga amniga iyo la dagaalanka argagaxisada.
Go’aankan lagu magacaabay Janaraalka howl gabka ah ee Raheel Sharif, ayaa la gaaray bishii November 2016, sida uu shalay warbaahinta u xaqiijiyay wasiirka gaashaandhiga ee dalka Pakistan, Khawaja Asif.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in go’aanka lagu magacaabay Janaraalka ay wada gaareen labada dowladood.
Sida lagasoo xigtay boqortooyada Sacuudiga, isbaheysiga waxaa uu la dagaalami doonaa kooxda Daacish iyo kooxaha kale ee argagaxisada ah.
Dowladaha isbaheysiga ku jira ayaa waxaa kamid ah:
Isutagga Imaaraadka Carabta,
Yemen iyo kuwo kale.
Iyadoo xarunta isbaheysigan militiri ay noqon doonto caasimadda boqortooyada Sacuudi Carabiya ee Riyaad.
Maamuliyaasha dalka Pakistan ayaa bilowgii hore ka gows adeegay markii ay sheegeen in Sacuudiga uusan wadatashi fiican kala yeelanin yegleelida isbaheysiga, hase yeeshee sanadkii 2015 ayaa xukuumadda Islamabad ay sheegtay in ay qeyb ka noqoneyso ururkan.
Dowladda Pakistan ayaa waxaa ay ka leex leexaneysay sidii aan wax lug ah ugu yeelan laheyn xasaradda ka jira Bariga dhexe, waxayse sheegeen in ay go’aankan qaateen markii ay heleen xog dhameystirin oo ku saabsan u jeedada isbaheysiga loo askumay.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa hadda waxaa ay hogaaminaysaa isbaheysiga la dagaalamaya falaagada dalka Yemen ee Xuuthiyiinta ah kuwaas oo inta badan dalkaas gacanta ku dhigay kadib markii laga awood roonaaday dowlada uu madaxda ka yahay hogaamiyaha dibad jooga ah ee Abdu Rabbu Mansour Hadi.